Sunday, 29 Sep, 2019 9:11 AM
भूपेन्द्रजंग शाही, महासचिव, तरुण दल
प्रदीप पौडेल नेविसंघ अध्यक्ष हुँदाका उपाध्यक्ष हुन्, भूपेन्द्रजंग शाही । दुईपटकसम्म कालिकोटबाट चुनाव उठे, हारे । त्यसपछि तरुण दलको महासचिव भएका उनको अहिले अध्यक्ष जितजंग बस्नेतसँग विवाद छ । जितजंगले उनलाई कारवाही गरे । उनले पनि जितजंगलाई बाँकी राखेनन् ।
० तरुण दलको कार्यकाल दुई महिना बाँकी हँुदा किन विवाद बढेको ?
– दुई हैन, एक महिनामात्र बाँकी हो । केन्द्रीय समिति ९५ सदस्यीय हो, तर कामचाहिँ चारजनाले मात्र गरिरहेको थियो । वास्तवमा केन्द्रीय समिति नै थिएन । हरेक विषयमा निर्णय गर्दा हामी चारजना पदाधिकारी मात्र हुन्थ्यौं । दुई सचिव नियुक्त गर्न बाँकी थियो । जिल्ला अध्यक्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधि, पार्षदहरुले ‘यो राम्रो भएन’ भन्दै आउनुभएको हो । एक त जिम्मेवारी नपाएको तनाव, अर्कातिर ९१ सीट रिक्त । साथीहरु गुनासो गरिरहने, तर हामीसँग मनोनित गर्ने अधिकार नहुने । त्यो अधिकार सबै पार्टीसँग । तीन वर्षसम्म तरुण दललाई पूर्णता दिन के–के बाध्यता थिए, बाधक को थियो भन्ने कुराको जवाफ मसँग पनि छैन । पार्टीका नेतालाई सोध्यो भने केही भन्दैन थिए । मैले भनेँ, नैतिकताको आधारमा यसको जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्छ । भाषणमा मात्र जिम्मा लिएर भएन । कि राजीनामा गरेर छोड्नुपथ्र्यो वा समाधानको पहल गर्नुपथ्र्यो । मुखले मात्र जिम्मा लिएर हुने होइन । यस्तो भएपछि तरुण दलमात्रै हैन, कांग्रेस पनि कमजोर भयो । त्यसपछि म बोल्न बाध्य भएँ ।
० अध्यक्षले त तपाईंलाई निलम्बन गरे, तर अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने अधिकार महासचिवले कसरी पाउँछन् ?
– तरुण दलमा उहाँको र मेरो अवस्था एउटै, अर्थात् हामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र महासचिव भएका । तर, दुबैजना साधारण सदस्य पनि थिएनौँ । दुबै नेविसंघमा काम गरेर आएको । तरुण दलमा आउनुअघि नेविसंघकै नेतृत्वका लागि दौडिरहेका । तर, भइदियौँ, तरुण दलको नेता । हामी दुबै जना विधि–विधान र प्रक्रियाबाट आएका थिएनौँ, राजनीतिक सहमतिमा भएका हौं । तत्कालीन तरुण दल केन्द्रीय समितिका साथीहरु चुनावमा उठ्न नपाउने निर्णय भइसकेको थियो । त्यसपछि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । म नेविसंघ र पार्टीमा काम गरिसकेको । पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताहरुबीच हामीलाई जिम्मेवारी दिँदा राम्रोसँग चल्ला कि भन्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यसैले हामी जसरी आयौँ, त्यसरी नै हटाइन पनि सक्छौँ । ‘हायर’ भएको मान्छे ‘फायर’ पनि हुनसक्छ नि † त्यसो गर्न पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता सहमत भइदिए पुग्छ । म उफ्रिएर वा जितजंगजी उफ्रिएर हुने केही छैन । गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरुले हो । न मैले जितजंगजीलाई अध्यक्ष बनाएको, न उहाँले मलाई महासचिव बनाएको † दुबैजना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आएका हौँ भन्ने वास्तविकता भुल्नु हुँदैन । उहाँले जुन कारवाहीको नौटंकी गर्नुभयो, यसको कुनै औचित्य छैन । सनक, दम्भ र घमण्डको भरमा कसैलाई दबाएर लैजान्छु भनेर संगठन चलाउन खोज्नुभएको छ । उहाँ केटाकेटी, अल्लारेपारामा आउनुभयो । यस्तै कारण हो, संगठन भताभुंग र कमजोर भएको । हामी त राजनीतिक चेतयुक्त युवा हौँ नि † गाउँ–टोलका विचारशून्य आवारा, सुकुलगुण्डा हैनौँ † त्यसैले राजनीतिक फोरममा हरेक कुराको डिलिङ राजनीतिक संस्कार र सुझबुझपूर्ण तवरले हुनुपर्छ । मन लाग्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन । यस्तो काम त विचारशून्य मानिसले मात्र गर्छ । उहाँ विचारशून्य मानिस होइन, सचेत र शिक्षित नै हुनुुहन्छ । तर, शैलीचाहिँ त्यस्तो देखिएन ।
० तपाईंले उहाँलाई कारवाहीचाहिँ किन गर्नुभएको नि ?
– हामीले राजनीतिक सहमतिमा पार्टीको टीको लगाएका हौँ † त्यसैले अध्यक्षले मलाई कारवाही ग¥यो भन्दा गलत म्यासेज बाहिर जाने भयो । मान्छेले विधान त कहाँ पल्टाउँछ र ? मजस्तो दुई–दुईपटक सांसदको उम्मेदवार भएको मान्छेको मानमर्दन गर्ने गरी, बेइज्जत गर्ने ढंगले, राजनीति सिध्याउने ढंगले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो । पार्टीगत हिसाबले म सिनियर हुँ । मलाई सखाप पार्ने गरी उहाँ तल्लो स्तरमा उत्रिनुभयो । उहाँ त्यो स्तरमा उत्रिएपछि मैले पनि विधान पल्टाइरहने स्थिति भएन । उहाँले जस्तो क्रिया गर्नुभयो, मैले उस्तै प्रतिक्रिया दिएँ ।
० बाढीपीडितको रकम हिनामिना गरेको आरोप के हो ?
– मैले यो कुरा मिडियामा हेरेर थाहा पाएँ । उहाँमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन उहाँले नै गर्ने हो ।
० युवा–विद्यार्थी संगठनलाई पार्टी कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी भनिन्छ । तर, तरुण दल धर्मपुत्रहरुको संस्था भयो भनिन्छ नि †
– त्यति साह्रो होइन । तरुण दल कुनै एनजिओ त होइन । कांग्रेस पार्टीको भातृ संगठन नै हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि यस्तो देख्नुहुन्छ । नेविसंघमा धेरैपटक पार्टी अध्यक्ष, महामन्त्री मनोनयन भएका छन् । अहिलेसम्म एउटा यस्तो नेता देखाउनुस्, जो पार्टीको मनोनयनबिना इलेक्सनबाट मात्रै चुनिएको होस् ।
० सदस्य नै नभएको मान्छेलाई अध्यक्ष र महासचिव बनाउँदा त्यही संगठनमा लडेर आएका मान्छेहरु फ्रस्टेटेड हुँदैनन् ?
– कुरा ठीक हो । तरुण दलकै राजनीति गरिरहेका साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्थ्यो । त्यो कुरा म सधैँ, खुलेरै भन्छु र मान्छु पनि । प्रश्न के हो भने, तरुण दलका साथीहरुले हस्ताक्षर नै गरेर हामी उठ्दैनौँ किन भन्नुभयो ? अनि, हामी नै हुनुपर्छ भनेर रोइलो गर्न नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन ? हामी ६ महिनाका लागि संयोजक बन्छौँ । आगामी निर्वाचनमा उठ्दैनौं भनेर उहाँहरुले कमिटमेन्ट गर्नुभएको हो । विशेष परिस्थिति आएको कारण हामी आउनु परेको हो । अर्काे कुरा, तरुण दल भन्या के ? तरुण दलमा नेविसंघ, कांग्रेसको मान्छे आउन नपाउने भए के माओवादी, वाइसिएलको मान्छे ल्याउने ? यसरी सोच्नुभएन । उनीहरुको मात्र सिण्डिकेट हो र तरुण दल भन्या ? हिजोदेखि जो लागेका थिए, उनीहरुले मात्र नेतृत्व गर्नुपर्ने ? तरुण दलको विधान हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको विचारलाई मान्ने हुनुपर्ने, ४५ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने । यी दुई कुरा भए तरुण दल हुन पाइन्छ । भूपेन्द्रजंग शाही तरुण दल हो कि होइन ? म ४५ बर्ष कटेको पनि छैन । कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता हुँ । म तरुण दल नभए कोचाहिँ तरुण दल हुन्छ ?
० यो विवाद कसरी सल्टिन्छ ?
– विवाद गर्ने मेरो चाहना पनि थिएन । म संगठनभित्र गुठबन्दी गर्नुहुन्न, पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे । तीन वर्ष साथ दिएको पनि हो । मेरो ठाउँमा अरु भएको भए पहिला नै झगडा भइसक्थ्यो । यो कुरा पार्टीमा पुगिसक्या छ । नेताहरु बसेर जे निर्णय गर्नुहुन्छ, स्वीकार्य छ । दुबैको कमजोरीलाई हेरेर सच्याउनुस् भन्नसक्छ । सत्तापक्षसँग लड्नुपर्ने तरुण दल आफैं लड्ने ?
० तपार्इंमाथिको कारवाही पनि गुटकै प्रभाव हो ?
– चुनाव हारेको पार्टी भएको हुँदा गुटबन्दी नगरौं, मिलेर जाऔं भनेको हुँ । विवाद त अधिवेशनमा गरौं भन्ने चाहना थियो । मूढेबलमा संगठन चलाउन खोज्ने । त्यो मलाई मन परेन ।
० तपाइँमाथि जुन ढंगले कारवाही गरियो, त्यसको विरुद्धमा तरुण दलकै (तपाइँहरुकै खेमाको) लक्ष्मी खतिवडा, दामोदर कोइराला वा पूर्वअध्यक्षहरु पनि बोल्दैनन् त †
– उहाँ एउटा ‘जंग’, म अर्को ‘जंग’ † हामी ‘जंग’हरु बोल्दा त केही अर्थ छैन भने अरुले केही बोलेन भनेर धेरै अर्थ राख्दैन । पार्टीको निर्णयपछि क्रिया–प्रतिक्रिया आउला ।
० अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीकै लोकतान्त्रीकरणमा प्रश्न उठेको छ । यस्तो पार्टीले लोकतन्त्रको नेतृत्व कसरी गर्छ ?
– लोकतन्त्र कांग्रेसको नशा नशामा छ । हामी कहाँ चुक्यौं ? केही कमजोरी भयो कि ? हाम्रो गतिविधिले कतै लोकतन्त्रमाथि ठेस पुग्यो कि ? पार्टीभित्र छलफल गर्नु जरुरी छ ।